FLV in Converter MOV - Beddelaan Videos dhexeeya FLV iyo MOV
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama Videos dhexeeya FLV iyo MOV
Sida aan ognahay, MOV waxaa badanaa loo isticmaalaa filimada iyo video files kale lagu badbaadinayo. Mararka qaarkood marka aan helno ah FLV video funny video ka-qaybsiga website, waxaa laga yaabaa inaan u ciyaaro la Apple QuickTime (MOV) Raaxo dheeraad ah. Ama mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aan rabno in aan badalo aad MOV in FLV si online dheeraad ah oo ku haboon wadaagaan. Sidaa darteed, waxaan u baahan nahay a FLV in MOV Converter , oo waxbay ushafeeci idanka shaqo ee labada diinta FLV in MOV iyo diinta MOV in FLV .
Ka dib markii aad ka soo dejisan FLV in Converter MOV - Video Converter oo ku xidh, waxaad raaci kartaa fudud 3 tallaabo hoos, iyo diinta aad video laga qaabka FLV in MOV ama MOV in si degdeg ah oo wax ku ool ah flv.
Tallaabo 1: Ku dar FLV ama MOV files
Orod on MOV in ay FLV Converter, in aad ku darto oo aad FLV ama MOV video files, waxaad isku dayi kartaa mid ka mid ah kuwan soo socda laba siyaabood.
Marka hore, jiidi aad video ka fayl file aad liiska suuqa kala qalliinka.
Labaad, riix "Add Files" icon (calaamada lagu daray a), si aad u dooratid video ama file maqal ah.
Talaabada 2: Edit FLV ama MOV video (Ikhtiyaar)
Dhab ahaantii waxaad ka boodi kartaa tallaabada haddii aadan jeceshahay in aad xaalkaa video. Si kastaba ha ahaatee, kuwa jecel yihiin in ay wax ka bedel aad FLV ama MOV si qurux badan video MOV shakhsi ah, aad si xor ah u adeegsan kartaa this FLV multi-functional in MOV Converter si ay u dhammayn.
Dooro video ah oo ka mid ah liiska file ah, iyo riix "Edit" button (Aayad qalinka yellow). Markaas waxaad FLV aad tayadoodii karo by beerista, beddelo video saamayn, iwm
Tallaabo 3: U beddelaan FLV in MOV ama badalo MOV in FLV
Si loogu badalo FLV in MOV ama MOV in FLV, waxaad riixi kartaa icon ee qaab video liiska, ama guji icon ee qalabka ag, taas oo horseedaysa ah "Settings" window si aad u astaysto goobaha wax soo saarka.
Talooyin: Halkan jidka dambe waxaa lagu talinayaa, sida "Settings" window kale oo ay bixisaa liiska hawlaha aad u tayadoodii aad video, sida encoder, xallinta, iwm
Guji "OK" ka dibna ku soo laabto interface hore, riix batoonka ah "Beddelaan" si ay u bilaabaan diinta aad video ka FLV in MOV ama ka MOV in FLV.
Oo taas dabadeedna waxaad riixi kartaa "Open Folder" in la furo folder halkaas oo files MOV soo saarka ayaa la badbaadiyey. Intaas waxaa sii dheer, iyada oo FLV in MOV Video Converter , waxa kale oo aad dooran kartaa meesha aad rabto in aad xaq u leedahay in lagu badbaadiyo aad files gediyay adigoo gujinaya Menu icon> doorashada.
Sida loo Beddelaan FLV in M4V
Beddelaan Audio iyo Video Waraaqda MP3 la MP3 Converter
Beddelaan WMA in MP3 la WMA in MP3 Converter
Sida loo Edit MKV metadata for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Sida loo Encode files H.264 la H.264 Encoder
Sida loo soo biir VOB Files